“Waxaa soo kordhay Xiisaha ay Itoobiya u qabto Isticmaalka Dekedda Berbera, waxaanannu ka wadahadalnay…” | Berberanews.com
Home WARARKA “Waxaa soo kordhay Xiisaha ay Itoobiya u qabto Isticmaalka Dekedda Berbera, waxaanannu...
“Waxaa soo kordhay Xiisaha ay Itoobiya u qabto Isticmaalka Dekedda Berbera, waxaanannu ka wadahadalnay…”
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland.
Addib Ababa-(Berberanews)- Wefti Wasiirro ah oo ka socda dawladda Somaliland, ayaa kulammo kala duwan Caasimadda Addis Ababa kula yeeshay Masuuliyiin ka tirsan dawladaha Itoobiya iyo Norway, kuwaasoo ay kawada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xoojinta xidhiidhka Somaliland iyo dalkaas ka dhexeeya, isticmaalka iyo horumarinta Dekedda Berbera.
Wefti uu Hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar oo socdaal shaqo ku jooga dalka Itoobiya, ayaa maanta y kulammo kala duwan la yeeshay Wasiirrada Arrimaha Dibedda, Gaadiidka, Isgaadhsiinta Itoobiya iyo Wasiirka Iskaashiga caalamiga ah ee dalka Norway, kuwaasi oo ay kala hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga Somaliland la leedahay dalalkaas.
“Kulammadii aannu la yeelannay Wasiirrada ka tirsan dawladaha Itoobiya iyo Norway waxaannu kala hadlay xidhiidhka ka dhexeeya Somaliland iyo dalalkooda iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiyada socda iyo kuwo cusub oo aannu doonayno in la bilaabo.” Sidaa ayuu Wasiirka Arrimaha dibedda Somaliland oo kulammadaasi warbaahinta uga warramay qodobaddii ay ka wada hadleen masuuliyiintii ay is arkeen.
Wasiirka Arrimaha dibadda oo ka hadlayay qodobadii ay isla falan-qeeyeen kulankii ay la yeesheen Wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee Norway, waxa uu yidhi; “Kulankii aanu galabta la yeelanay wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee dalka Norway, waxa uu si gaar ah u taabanayay muwaacimadda ay siiyaan Somaliland sidii dawladda Norway u kordhin lahayd.” Dr. Maxamed Cabdillaahi waxa kale oo uu sheegay in ay arrimaha nabad-gelyadda iyo adeegsiga Marsadda Berbera ka wadahadleen Wasiirrada dawladda Itoobiya ee ay la kulmeen.
“Wadahadalladii aannu la yeelanay Wasiirrada Itoobiya waxay u badnaayeen qodobbo u badan dhinaca nabad-gelyada ee labada dal iska kaashadaan, arrimaha siyaasadda. Waxa kale oo ay Somaliland doonaysaa inay ka dhex muuqato horumarinta iyo shirarka dalalka Urur-goboleedka IGAD, waxaana labada dal ee Jabuuti iyo Itoobiya aannu kala hadalnay sidii ay Somaliland martabad wanaagsan ugu yeelan lahayd urur-goboleedkaasi oo ay waliba xubinna ka noqoto.” ayuu yidhi Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wataa wuxuu yidhi; “Kulanka aannu la yeelanay Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaadhsiinta dawladda Itoobiya waxaan kulankaasi si khaas ah ugaga wadahadalnay sidii ay dawladda Itoobiya u isticmaali lahayd Dekedda Berbera iyo sidii arrintaasi ay u meel-marin lahayd, waxaana soo kordhay xiisaha ay Itoobiya u qabto isticmaalka Dekedda Berbera. Waxa kale oo aannu isla soo qaadnay sidii Dekedda loo horumarin lahaa, waxaanay arrintani kor u qaadaysaa dhaqaalaha Somaliland.”
Weftigani waxay Salaasadii toddobaadkan kaga qeyb galeen magaalada Addis Ababa shir ballaadhan oo lagu faaqidayay sidii kor loogu qaadi lahaa horumarinta dalalka ku bahoobay urur-goboleedka IGAD, kaasi oo ay goob-joog ka ahaayeen waddammadda waaweyn ee Qaadhaan-bixiyeyaasha ah. Waxaana shirkaasi markii u horreysay lagu soo marti-qaaday Somaliland. Iyadoo Weftiga Wasiirradu ay khudbad ka jeediyeen furitaankii shirkaasi.
Weftigan waxa xubno ka ah Wasiirrada Wasaaradaha Qorshaynta Qaranka iyo Arrimaha gudah Somaliland Dr. Sacad Cali Shire iyo Md. Maxamed Nuur Carraale (Duur).
Previous articleTirada Carruur Walaalo ah oo ku geeriyooday Dhaamka Jig-jiga-yar iyo Dadweynaha Xaafadda oo ka cawday halista uu ku hayo
Next articleMuuse Biixi Muxuu ka yidhi Kulanka Dhex-maray Ibraahin-Dhaga-weyne?